IZIQITHI ZASEKHITSHI EZIHLE KUNYE NEBENCH YOKUHLALA - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iziqithi zaseKhitshi ezihle kunye neBench yokuhlala
Iziqithi zaseKhitshi ezihle kunye neBench yokuhlala
Wamkelekile kwigalari yethu yeziqithi zasekhitshini ezintle ezinezihlalo zebhentshi. Ikhitshi yindawo entle yokuba usapho kunye nabahlobo baxhomeke kunye nokuhlala. Ezi khitshi ziphezulu zibonelela ngezicwangciso zomgangatho ovulekileyo kunye neziqithi ezikhulu ezinendawo yokutya kwindawo yokutyela ukusuka kwisiko elakhelwe kwiibhentshi. Apha ngezantsi uyakubona iindidi ezahlukeneyo zeekhitshi zesiqithi zasekhitshini zokusebenzisa isitulo sokuhlala ukwenza indawo yokutya ememayo.
Ikhitshi elinobunkunkqele kulo mfanekiso ungentla libonisa iikhabhathi ezimhlophe ezenziwe ngomthi kunye nemethi yokuphamba yemarble enesiqithi esine-L esinee-L. Yenziwe ngombala omnyama wesikhumba kwisitulo sebhentshi, ifakwe kakuhle ngaphakathi kwicala elingaphakathi le-L elime okwe-counter. Ibhentshi emile uL ijongene netafile yokutyela yeglasi enezitulo ezongezelelweyo. Ukusetyenziswa kwezihlalo ze-acrylic kunye nezentsimbi ezingafaniyo kunika oku kuseta ngakumbi ukusekwa kwemizi-mveliso, indibaniselwano elungileyo kulungiso lwekhitshi ebunjiweyo kunye nezibane zejometri ezixhonywe phezu kwebhentshi lasekhitshini.
Njengoko amaxabiso earhente yokuthengiswa kwezindlu eqhubeka nokunyuka, abakhi kunye neentsapho zikhangela ngakumbi nangakumbi iindlela zokuyila zokudibanisa iindawo. Babeke ipremiyamu kumagumbi okusetyenziswa okuninzi kunye neendawo kubandakanya isicwangciso esivulekileyo kunye noyilo lwenguqu olunoyilo oluhambelanayo. Esinye sezona ndawo zisetyenziswa kakhulu ekhitshini nakwitafile yokutyela. Iqinisekisiwe ukuba ingasetyenziswa ubuncinci amaxesha e-7 ngeveki, indawo ingaphezulu kwendawo yokulungiselela ukutya kunye nokutya, yindawo yokusebenza, yokudlala kunye nosapho kunye nokudibana kweendwendwe.
Ukuhlala kwisiqithi seKhitshi
Ukuhlala peninsula yasekhitshini
Itafile yokutya idityaniswe nekhitshi
Isiqithi esithandekayo seRolling
Iingcamango zeKhitshi kunye neSihlalo seBench seSiqithi
Isitshixo kwindibaniselwano enkulu yokutya ekhitshini kukulungiselela isicwangciso esivulekileyo sendawo ezimbini. Esi sikimu asizukusebenza ukuba ikhitshi lahlulwe kwindawo yokutyela ngeendonga eziqinileyo. Inqaku lokudibanisa izithuba ezibini kukudala unxibelelwano kunye nokudityaniswa okudibanisa ezi zinto zimbini kwaye zinike indlela yeendlela ezifanelekileyo zokusebenzisa isithuba.
Nazi iindlela ezine zokudibanisa indawo yokutyela ekhitshini lasekhaya:
Ufanele ukuyinxiba njani imisesane yakho yomtshato
Nokuba inkulu okanye incinci, isiqithi sekhitshi sime sodwa kwaye ngaphandle kwekhabhathi kunye neekhawuntari. Oku kunika abayili kunye nabanini bamakhaya inkululeko engakumbi yokuphonononga ngamathuba ngaphandle kokuphazamisa ukuhamba, ulingano okanye umsebenzi.
Inkulu Isiqithi sekhitshi yesiqhelo inokurhangqwa zizihlalo-ngokukhethekileyo izitulo zebhari okanye ibhentshi ukwenza indlela yokuhamba phakathi kwesiqithi kunye nekhitshi ekhitshini kube lula ukuyihamba. Isiqithi esincinci sisenokungafuneki nasiphi na isihlalo, ngakumbi ukuba senzelwe isidlo esincinci okanye ikhefu lekofu.
Eyona nto intle malunga neziqithi lelona candelo lingezantsi kwekhawuntari inokusetyenziselwa ishelufu eyongezelelweyo, ikhabhathi okanye indawo yedrowa. Ikwayindlela entle yokubonisa ukongeza phantsi kwezibane ukuze uqhubeke nokutsalela ingqalelo kwesi siqithi.
Le khitshi yesitayile se-Art Nouveau iqala ngeempawu zejiyometri kakhulu, ngokuqala ngeekhawuntari zekhitshi ezijolise kumacala amabini ziqatyelwe ezindongeni ezinekona. Ezi khabhathi zephaneli zitshixwayo kunye nabadwebi kunye nekhabhathi yesetyhula yeekhabhathi zeglasi zahluke kakuhle kwiitayile zendlela engaphantsi ezisetyenziselwa ukubuyela umva, kunye neefestile ezime nkqo ngapha nangapha koluhlu lwendawo.
Isiqithi esikhulu esine-sink yokusebenza, nangona sisebenza ngomthi omnyama, sikwanemixholo yejometri. Isiqingatha senyanga esisikiweyo senziwe kwisiqithi sasekhitshini, kwaye ibhentshi emhlophe ephakanyisiweyo yaphosa ngaphakathi kuyo. Esi sihlalo sihlala kwitafile ejikelezayo engaphandle kwesiqithi sekhitshi, ejikelezwe zezinye izitulo zokutyela ezine- izihlalo ezenziwe ngomthi ezenziwe ngesilivere ezinempahla emhlophe emhlophe.
Peninsula phantse ngokuzenzekelayo kuthetha ukuba ukuseta ikhitshi kuya kuba yindlela ye-galley okanye ilayishwe kabini. Oku kugqibelele kwiikhitshi ezinendawo encinci, njengoko inye kuphela indlela yokudlula efunekayo yokusebenzela zombini iincopho zokubala. Ukongeza, izitulo zebar zepeninsula zinokubekwa ngaphakathi okanye ngaphandle kwekhawuntara, kuxhomekeke kwinkangeleko okanye umsebenzi umninikhaya okanye umyili afuna ukuya kuwo. Ipeninsula ikwayindlela entle yokwenza indawo yokubeka izitulo zebar phantsi kwekhawuntara okanye ukwenza ishelufu eyongezelelweyo okanye indawo yokugcina.
Le khitshi yesitayile yakudala inepeninsula enezihlalo ezakhelweyo ebhentshini. Iikhabhathi ezintle ezimhlophe eziphakanyisiweyo zepaneli kunye nabadwebi kunye ne-architrave eqingqiweyo yeNeoclassically ngaphezulu kwoluhlu lweebhotile zibonelela ngobuhle kuyilo.
Ifaniswe nelitye elingaphantsi kwethayile i-backsplash kunye nesiqithi esiphakathi, ikhitshi ngumzekelo olungileyo wekhitshi yesitayile sendabuko. Isongezo esitsha sikhona kumda wangaphandle usingasiqithi wasekhitshini kunye nebhentshi ephantsi eyenziwe kwiphaneli efanayo emhlophe ephakanyisiweyo phantsi kweedrowa zebhentshi. Njengokwahlukileyo kwimigca emhlophe ecocekileyo, itafile yokutyela emnyama eyenziwe ngesikwere ibekwe ngezitulo ezingalinganiyo ezingqonge yona, kwaye inyuselwa ngeqokobhe lolwandle oluhlobo lwelitye.
Ikwasebenziseka kwiikhikhini esele zikhona, zintathu iindlela zokudibanisa itafile entsha yokutyela kuseto lwekhitshi esele ikho. Indlela yokuqala ibalulekile kwiikhitshi ezimile okwe-U, apho itafile yokutyela yongezwa embindini wekhitshi. Le yindlela elungileyo yokufezekisa inkangeleko ethile, kodwa inokuvelisa iingxaki zokuhamba kamva.
Indlela yesibini yokudibanisa itafile yokutya kukuyibeka kufutshane nesiqithi sekhitshi okanye usingasiqithi. Oku kudala ukujikeleza okungcono kwaye lithuba elifanelekileyo lokusebenzisa izinto ezichaseneyo, njengoko zombini itafile kunye nekhawuntara ziya kuba kufutshane.
Indlela yesithathu yokudibanisa indawo yokutyela kukwandisa isiqithi okanye usingasiqithi kwindawo ekuphakama kuyo kabini. Oku kuyafana nakwindlela yesibini kodwa yindlela yoqoqosho ethe chatha ngobulumko, kuba indawo encinci yomgangatho iyafuneka kwaye izitulo zebar ezilula okanye isitulo sekhitshi sezihlalo ezinokudityaniswa kwinqanaba lokulwa elisandula ukwenziwa.
Le khitshi yesitayile yangoku yase-Italiya ineetafile zokudibanisa ezihlanganisiweyo kunye nezihlalo zebhentshi. Uyilo lunika iithayile zelitye elityatyekayo ezinemibala ecekeceke kwi-backsplash yayo, ekhanyiswe ngokukhanya kwepelmet kunye nokuthelekisa ngokukhululekileyo ngomthi onemibala emnyama osetyenziselwa iikhabhathi zepaneli eziphakanyisiweyo kunye nokugcinwa kwewayini emile X.
Ibha yekhitshi ebekwe eludongeni ibekwe ngendlela eyi-L, encinci ine-L Isiqithi sebeadboard ekhitshini kwiziko layo. Isiqithi sekhitshi sineebhentshi ezincinci ezime L ezinokudityaniswa kubume baso. Ihonjiswe ngemiqamelo yokuphosa iitoni zomhlaba, ibhentshi ijongene netafile enombala omnyama wokutyela ejikelezwe sisimbo sangoku somgubo ohlaza okwesibhakabhaka ophakamileyo.
Kukho amathuba amabini amakhulu okusebenzisa isiqithi esinokuqengqeleka. Okokuqala, isiqithi esiphathwayo sisongezo esikhawulezayo nesilula ekhitshini esidinga ukulungiswa okanye ukulungiswa ngakumbi okanye indawo yokutyela. Isiqithi esiphathwayo sinokulingana nezinto zekhitshi esele sikhona okanye sifumane ukugqitywa okungafaniyo nokuseta okudala.
Enye indlela efanelekileyo yokusebenzisa iziqithi eziphathwayo ziikhitshi ezixakekileyo ezinokufuna indawo yokulungiselela eyongezelelweyo, ngakumbi ukuba ngaphezulu komntu omnye oza kupheka ekhitshini ngaxeshanye. Xa singasetyenziswa, isiqithi sinokuqengqeleka ngokulula kwaye sibekwe phantsi kwelinye lamanqwanqwa aphezulu.
Le khitshi yesitayile ebalaseleyo inezinto ezomeleleyo zomgangatho weplanga kwindawo yonke. Ikhabhathi emhlophe epeyintiweyo emhlophe egqityiweyo yekhabhathi kunye neCalacatta marble slabs esetyenziselwa i-countertop kunye ne-backsplash zilungile kumgangatho omnyama. Isiqithi eside sekhitshi esinki sibonisa ibhentshi ephantsi kwicala langaphandle elingaphezulu kunye nelaphu eliphantsi kwebhentshi. Le bhentshi ijongene netafile yokutya yokutya yeediliya ende, ekhanyiswe ngesibane sexesha lesigubhu. Itheyibhile ende ikwanazo nezitulo ezenziwe ngamaplanga ezibengezelelweyo zokufumana indawo yokuhlala eyongezelelweyo.
Le khitshi yesitayile se-antique inesiqithi esikhulu seengcibi esinendawo enkulu yamatye e-slab exhaswa ziiposti zomthi ezimnyama kunye nendawo yokudibanisa. Izitulo eziphakamileyo kunye nebhentshi ephezulu eyenziwe ngomthi omnyama ofanayo zinikwe izinto ezimhlophe ezimhlophe kwaye ziyimidlalo elungileyo kwitafile ephambili yokutyela kwelinye icala, zombini iiseti zikhanyiswa zizibane zesitayile seClassic. Ukusekwa kwe-rustic kwahluke kakuhle kwenye ikhabinethi ekhitshini-kwenziwa ngetyuwa kunye nepepile yokubeka ilitye kunye nokubuyela umva kunye nekhabhathi enombala ophakanyisiweyo.
Izibane zezivini ezingqukuva ezijingayo zixhonywe ngaphezulu kwesitulo sebhentshi enesihlalo sakusasa kule khitshi yanamhlanje. Iiplanga zokukhanya ezikhanyayo ezinokutya okuziinkozo okunzima zijikeleza yonke le khitshi, xa kuthelekiswa nokusikwa okuthe tyaba kweekhabhathi ezimhlophe kunye neetraw kunye ne-herringbone tile backsplash. Isiqithi esincinci sekhitshi senziwe ngokhuni olukhanyayo olungwevu, sifakwe itheyibhile emhlophe ye-quartz enezitudiyo kwizitulo zebar ezingwevu ezixhaswayo.
Esi situlo sekhitshi sihleli ngefestile, sigqitywe kwikona kwaye sikhanyiswe ngefestile emhlophe emhlophe emhlophe, ayisiyondawo yokutyela kunendawo yokutya okulula, ikofu yasemva kwemini kunye nokufunda okuzolileyo. Imiqamelo enemibala eqaqambileyo, amakhethini kunye nemiqamelo lichukumisa ngokuqinileyo ikhabinethi emhlophe emhlophe. Indawo yeKhabinethi ikwabonelelwe phantsi kwebhentshi ngenjongo yokulondoloza isithuba. Isibane sesithathu esivuniweyo sifakwe kanye phambi kwesihlalo sebhentshi, esime phezu kwepeninsula ephambili yekhitshi ejonge kancinci ukulingana ubume begumbi. Isitayile esiphantse sasesiGothic sineekhitshi zomthi ezikhanyayo, imigangatho kunye nekhabhathi phakathi kwemithwalo enzima yokusebenza kunye nokubumba okuhambelana ne-countertop emnyama kunye ne-backsplash. Isinki yendlu yasefama yongeza kubumnyama kunye nokujongeka okungathandekiyo, njengoko kunjalo nesibane sependant se-retro. Inkqubo ye- Isiqithi esikhulu sekhitshi esinendawo yokuhlala inomxholo womthi opholileyo ogcinwe phezulu yikhabhathi epeyintiweyo emnyama emnyama. Umda ongaphandle wesiqithi unebhentshi ephezulu kunye nezitulo eziphakamileyo kwiprofayili yomthi omnyama kunye nokuhonjiswa okumnyama.
Ngaphandle kokudityaniswa okutsha kweli khitshi sele likho ngaphambili, isimbo sodidi lwakudala kunye neprofayili yesi siqithi somthi seRustic somthi kunye nemimandla ekudala ikhoyo. Yenziwe ngokutya okukhaphukhaphu kodwa okutyebileyo, iintloko zetafile kunye neebhentshi zihamba kakuhle ngomthi oxineneyo omhlophe opeyintiweyo wesakhelo sebhentshi.
Isibini seekhandlela ezixhonywe phezu kwebhentshi yokutyela zikwanika oku kulungelelaniswa kwesiXeko sesikolo esidala. Ikhitshi lokuqala linemibala emhlophe eyenziwe ngepeyinti, iikhabhathi zepaneli, iphepha lodonga lwakudala lomqolo wangaphambili kunye nendawo yobhedu endala.
Le khitshi ephezulu yesitayile seGatsby ineempawu ezibunjiweyo ezenziwe ngentsimbi nezibane kwiglasi yayo. Ezi zibane zixhomekeke ekhitshini elinekhabhathi enzima kunye nemigca ethe nkqo kwimiphezulu yeetafile zayo ezimdaka neziluhlaza. Ukutyhalwa ngokuchasene nesiqithi esikhulu sekhitshi kuhleli izitulo ezisezantsi eziphakanyisiwe kwilaphu le-burgundy kwaye zifaniswa nezitulo zokutya zesitayile sangokuhlwa phezu kwetafile enzima yokutya.
Le khitshi yosapho yesiko yakhiwe ngobume be-L kunye nendawo yokusebenza ehambelana nodonga olwahlukileyo, igcwalisa igumbi ngee-nook ezahlukeneyo zomsebenzi. Imithi efudumeleyo esetyenziselwa yonke ikhabethe ngokubanzi ngumbala osisiseko, njengoko zinjalo iithayile zomgangatho wekhrimu. Isiqithi esisembindini sinendawo emile okweqanda engu-L yokulungiselela ukutya. I-countertop encinci ye-angled ishicilelwe ngaphantsi kwe-countertop kodwa ibonisa i-countertop efanayo yetyuwa kunye nepilisi ebonisa ifenitshala yevini kwibhentshi ephantsi kunye nesihlalo sokutya. Iseti yonke ikhanyisiwe yitayile yeediliya ezimbini zentloko ezijingayo.
Le khitshi yesitayile yemveli inemibala engaphezulu kwesiqhelo kunye nokusetyenziswa komthi omnyama wecherry kwiikhabhathi zephaneli ezitshixwayo kunye needraw, ezihambelana ne-cream-color mosaic tile backsplash. Imiphezulu yeetafile ikwisilayidi esenziwe ngamatye anzima, ekwaboniswa nakwisiqithi esiphakathi, sikhanyiswe zizinto ezintathu ezijingayo. Isiqithi esisembindini sikwabonisa ibhentshi esezantsi kumthi omnyama kunye nezinto zokumnyama ezimnyama, indawo yokuhlala eyongezelelweyo kwitafile yokutya eshushu ecaleni kwayo.
Le khitshi yesitayile sendlu yendlu ibonisa ulungelelwaniso olumileyo, kunye neendawo zokubala ezisasazeke macala onke egumbini. Iskimu esifanayo senziwe kwiikhawuntari, nangona kunjalo, ngee-countertops zayo zetyuwa engwevu kunye nepepile, ecocekileyo emhlophe ephakanyiswe yipaneli yekhabhathi kunye nesiseko, kunye neendonga ezinemibala yekofu. Kwiziko, isiqithi esikwinqanaba eliphambili sisebenza njengendawo yokuntywila kunye neyokulungiselela kwindawo yayo ephezulu kunye nendawo yokutya kwasekuseni kwindawo yayo esezantsi xa ixutywe nebhentshi yeplanga emnyama emnyama. Iithayile zomgangatho ombala omnyama kunye nokhanyayo zijikeleza ujikeleze igumbi kwaye zidibanisa yonke inkangeleko ngaphandle komthungo.
Le khitshi yesiko lendabuko yeHampton ineekhabhathi zekhitshi ezintle kunye nabadwebi kwikhabhathi yayo enodonga. Olu ludibaniso olulungileyo kunye netafile yokutya ephambili ejonge edock ngefestile enkulu yemifanekiso. Isiqithi sasekhitshini simile okwe-L kwaye sibonisa isiseko somthi esimhlophe esimhlophe esenziwe ngobunkunkqele beenkuni kwitafile, ekhanyiswe ngeentsimbi zentsimbi. Isiqwenga sesiqithi esimilise u-L sibonisa ibhentshi ephantsi ehonjiswe ngemiqamelo engwevu kunye nemilo ebhulowu. Indawo yokuhlala ibhentshi ijongene netafile yokutyela engwevu emnyama, ijikelezwe kwelinye icala zizitulo zomthi ezifudumeleyo kwiprofayili yendabuko.
Inkangeleko ecocekileyo yeMinimalist yeli khitshi liyabulela ikakhulu kwiithoni ezimhlophe ezisetyenziselwa zonke iindonga zayo kunye neekhabhathi ezilula ezigungxulweyo, iishelfu ezivulekileyo eziphezulu, kunye needrowa. Imigca emhlophe ecocekileyo incediswa ngetafile yelitye elikhanyayo ekukhanyeni peninsula yasekhitshini kunye ne-L ezimile okwe-L. I-ledge isebenza njenge-bar yesidlo sakusasa ekhawulezileyo, kwaye inombala okuphela kombala kwigumbi lonke-ibhentshi ebomvu eqaqambileyo ngaphambili kuyo yonke useto lwekhitshi.
Le inkulu ikhitshi yesiqithi esiphindwe kabini kuyilo lwegcisa olubonisa imiqadi yeplanga evulekileyo kwisilingi emhlophe emhlophe ehambelana nokugqitywa kweenkuni ezisetyenziselwa iikhabhathi kunye needrowa. Izinto ezingaphezulu kwendalo zibandakanya iithayile zomgangatho wesikwere, kunye neetafile zamatye ezipholileyo. Ukucoca, izinto ezingaphezulu kwexesha langoku ziye zongezwa ngohlobo lweetayile ezimhlophe ezingaphantsi komhlaba kwi-backsplash kunye ne-oval-shaped-chandelier yeglasi ngaphezulu kwesiqithi esincinci sekhitshi.
I-trio yezixhobo ezinyibilikisiweyo zesinyithi zixhonywe ngaphezulu kokukhutshwa okumile oku-L okukhulu. Ibhentshi emile njengo-L iphinda kabini njengendawo yokutyela eneebhentshi ezibanzi zebar kwicala langaphandle. Iibhentshi zenziwe nge-Contemporary geometric upholstery, kodwa gcina iprofayili yakudala kwisakhelo sayo somthi.
Eli khitshi licocekileyo kunye nexesha langoku lekhitshi kwiziko lalo kwinqanaba elimbini Isiqithi sasekhitshini esinebha yesidlo sakusasa isitulo. Isiqithi sasekhitshini, esenziwe ngomthi omhlophe opeyintiweyo, senziwe isiteki somthi esidlamkileyo kwaye sikhanyiswe ngesitayile seediliya esijingayo.
Umphezulu womthi osezantsi kumqolo ofanayo womthi uqhotyoshelwe kwinxalenye engaphandle kwesi siqithi kwaye ifaniswe nebhentshi ende ende eyenziwe ngomthi enokuthi ibekwe ngokulula phantsi kwekhawuntari. Oku kugqobhoza ixesha elide, kufakwe iidrowa ezinesityana njengendawo ekhawulezayo yokutya isidlo sakusasa enendawo yokugcina eyaneleyo phantsi kwetafile kunye nokusondela kufutshane nekhitshi eyenziwe ngo-L eyenziwe ngomthi omhlophe opeyintiweyo kunye nekhabhathi yeglasi. Elinye icala lekhitshi linendawo yokusebenzela enekhompyuter yedesktop kunye nesihlalo sedesika somthi.
Esi siqithi sasekhitshini esinendawo yokubeka imbiza siyafumaneka eWayfair. Oku kulula ukuba kuqokeleleke isiqithi sekhitshi sisisombululo esikhulu ekhitshini esasakhiwe ngaphambili esidinga ukuphuculwa kwisithuba kunye nesitayile. Yenziwe ngomthi omnyama, iseti ibandakanya irack emnyama yentsimbi ngaphezulu kwekhawuntari. Imvakalelo ye-rustic yesi siqithi sincinci se-aok yongezwa kakuhle kuyo nayiphi na ikhitshi. Kule meko, ibonelela ngombala kwindawo yonke emhlophe nekhitshi enkulu enombona.
iloli yokutya eqeshisa umtshato
Ukutshintsha kwegama kwi-nc emva komtshato
Esona sipho silungileyo kwisikhumbuzo somfana